नयाँ बसपार्कको होटेलमा भेटियो युवकको शव, सँगै बसेका २ जना पक्राउ — Sanchar Kendra
१गण्डकीमा कोरोना संक्रमणको डरलाग्दो अवस्था, ९४ जनाको मृत्यु
२माधव नेपालले किन बोलाए बैठक ?
३ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्नै लाग्दा माधव नेपालले बोलाए आफूपक्षीय नेताहरुको बैठक
४ओली पुन: प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि प्रचण्डले के भने ?
५कोरोना नियन्त्रणमा विश्वभर चर्चामा रहेकाे भुटानी मोडल
६जङ्गलमा यस्तो काण्ड मच्चाइरहेका बेला अचानक प्रहरी पुगेपछि भयो दोहोरो भि’डन्त
७विवाहको सात महिनापछि नेहा रोहनप्रितबीच हातपात, भाइरल बनेको भिडियोसहित
८ओलीलाई प्रचण्डले फोन गरेर भने- यो के तमासा गर्नुभएको ?
९चपली हाइटमा के भयो त्यस्तो सहमति ? जसकारण फेरी प्रधानमन्त्री बने ओली, खुल्यो यस्तो रहस्य
१०प्रधानमन्त्री ओलीले आज शपथ लिने, महन्थ र नेपाल समूहलाई मन्त्रिपरिषदमा समेट्ने प्रयास
११केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त, सपथ भोलि
नयाँ बसपार्कको होटेलमा भेटियो युवकको शव, सँगै बसेका २ जना पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंको नयाँ बसपार्क नजिक मित्रनगरको एक होटलमा एकजना युवकको शव फेला परेको छ । शनिबार राति १० बजे होटेलमा स्याङ्जाका नारायणबहादुर घर्ती क्षेत्रीको शव फेला परेको महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जका डीएसपी रोशन खड्काले जानकारी दिए ।
मृतकको नागरिकताको आधारमा उनको परिचय खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । मृतकको घुडामा चोट लागेको जस्तो देखिएको र अन्य ठाउँमा त्यस्तो केही नदेखिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
शव पोष्टमार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पठाइएको छ । घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले दुईजना युवकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा घर्तीसँगै होटेलमा बसेका राजकुमार गाहा र झक्कुराम बस्नेत रहेका छन् ।